नासाले सार्वजनिक गरेको वास्तविक सूर्यको आवाज, यस्तो सुनिन्छ
दैनिक अनलाइन | पुस २०, २०७६ आइतबार | 0
के सूर्यको पनि आफ्नै आवाज हुन्छ ? यदी हुन्छ भने त्यो आवाज कस्तो हुन्छ ? यस विषयमा शनिबार ४ जनवरीको बिहानदेखि देशभर चर्चा भइरहेको छ।
किनकी पूर्व आईपीस अधिकारीले शनिबार बिहान ८ बजे ट्वीट गर्दै सूर्यले ओमको आवाज निकाल्ने गरेको बताए। उनले यो पनि दाबी गरेका छन् की यो आवाज अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले रेकर्ड गरेको हो। किनकी यो गलत थियो, जसका कारण किरण वेदी ट्रोल बनेका छन्।
अब प्रश्न यो छ की आखिर सूर्यको वास्तविक आवाज कस्तो हुन्छ ? किरण वेदीको ट्वीटपछि लगातार अडियो, अभियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा अलग अलग प्लेटफर्ममा भाइरल बनेका छन्। तर वास्तविकता त्यो भन्दा फरक छ।
आज हामी तपाईलाई नासाका वैज्ञानिकले रेकर्ड गरेको आवाज सुनाउने प्रयास गरेका छौँ। सूर्यको आवाज सुन्नुअघि यो पनि जान्न जरुरी छ की कसरी सूर्यको आवाज रेकर्ड गरियो। यो काम नासाको सोलर एण्ड हेलियोस्फेयरिक अब्जरवेटरीका वैज्ञानिकले गरेका थिए। यस मिशन पूरा गर्नका लागि वैज्ञानिकलाई करिब २० वर्षको समय लागेको थियो।
नासाका वैज्ञानिकका अनुसार सूर्यको गतिलमा भइरहेको परिवर्तनका कारण सूर्यबाट निस्किने सौर्य फ्ल्यास र विष्फोटका कारण आवाज निस्किने गर्दछ।